Orinasa fitsaboana - Mpanamboatra fanafody any Sina, mpamatsy
Lamba voafantina avo lenta, lamba vita amin'ny landihazo vita amin'ny polyester, malefaka ny mikasika azy, mahasosotra ary mifoka rivotra, mora karakaraina ary tsy mora miketrona.
Takelaka fandriana fitsaboana roa sosona
Lamba polyester-landihazo voafantina, malefaka sady sariaka amin'ny hoditra, miaina ary mahazo aina, tsy misy miketrona, tsy misy mikitroka, tsy misy baolina, mora diovina ary mitazona endrika tsara.
Takelaka fandidiana roa sosona
Ny orinasa dia manohana ny habetsaky ny fonosana fandidiana roa sosona sy lamba famaohana tokana. Raha manana fepetra takiana manokana amin'ny famolavolana endrika manokana ianao, dia andao haka hevitra sy hifampiraharaha.
Akanjo fandidiana indroa sosona
Fitaovana voajanahary avo lenta voajanahary, mahasalama sy sariaka amin'ny tontolo iainana, fahateren'ny rivotra matanjaka, fahombiazan'ny vidiny avo, fanasana miverimberina dia mbola vaovao ihany, azo zahana amin'ny maripana sy malefaka.
Akanjo fandidiana amin'ny lafiny roa
Ny orinasa dia afaka manamboatra ny vokatra mpitsabo mpanampy amin'ny sehatry ny fitsaboana, mampivelatra sy mamokatra tsy miankina ary mifehy tsara ny kalitaon'ny vokatra.
Ny akanjo dia vita amin'ny lamba azo lena, tsara tarehy amin'ny hoditra, mahazo aina amin'ny mikasika azy, ary mahazo aina sy malefaka entina. Ny fisehoana ankapobeny dia mitovy amin'ny an'ny akanjo an-trano. Manangana loko madio sy madio izy io.
Ny paosin'ny paosin-tànana lehibe eo amin'ny tratra dia mora sy azo ampiharina. Ny lamina tsy tapaka amin'ireo teboka onja vita pirinty dia lamaody ary feno fahafinaretana, mampihena ny tsy fahazoana aina ara-tsaina ataon'ny marary.
Lamba famaohana fandidiana
Ny vokatra dia mahatohitra ny mari-pana avo sy ny fanerena avo lenta, ny baolina fanoherana ny bakteria, ary tsy azo ampiasaina aorian'ny fanaovana sterilization. Tariby mahafinaritra, asa-tanana metimety, mora ampiasaina mandritra ny fandidiana, ny fahaiza-mihetsika mahery, tsy mora ovaina, matanjaka ary maharitra.
Akanjo fohy fanatanjahan-tena haingam-pandeha, Palitao fanatanjahan-tena, Akanjo fohy vita amin'ny ravina haingam-pandeha ho an'ny lehilahy, Fanodinana santionany sy famokarana, Pataloha fanatanjahan-tena ho an'ny lehilahy, Lamba firakotra roa sosona,